Paris Saint-Germain oo aan ka rajo dhigin inay la soo wareegto xiddig ka tirsan koox ka dhisan dalka Spain – Gool FM
(Paris) 9 March 2019. Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa la soo warinayaa inay weli rajanayso inay la soo wareegto goolhaye Jan Oblak oo ka tirsan naadiga reer Spain ee Atletico Madrid.
Naadiga reer France ee PSG ayaa la shaaciyey inay weli ugaarsi ugu jirto goolhayaha kooxda Atletico Madrid ee Jan Oblak, inkastoo xiddigan reer Slovenia uu qorsheynayo inuu baaqi ku sii ahaado garoonka Wanda Metropolitano.
26-sano jirkaan kaasoo kooxda Atletico Madrid kaga soo biiray naadiga Benfica sanadkii 2014-kii ayaa horumar ballaaran sameeyey waxaana uu noqday mid ka mid ah goolhayeyaasha ugu fiican kubadda cagta Yurub labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay.
Goolhayahan ayaa xilli ciyaareedkan markale qaab ciyaareed sare ku jira, isagoo shabaqiisa gool ka ilaashaday 14 kulan oo ka mid ah 26 kulan oo uu ciyaaray horyaalka La Liga intii lagu guda jiray kal ciyaareedkan 2018-19.
Oblak ayaa dhawaan shaaca laga qaaday inuu qorsheynayo inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa Atletico, laakiin sida ay warinayso jariiradda Marca ee ka soo baxda Spain, Naadiga PSG ayaan marna ka rajo dhigi doonin inay la soo saxiixato xiddigan reer Slovenia.
Labada goolhaye ee Alphonse Areola iyo Gianluigi Buffon ayaa wadaagay gacamo gashiga kooxda PSG xilli ciyaareedkan, kan hore ayaana 22 kulan saftay, halka midka dambe ee Buffon uu ciyaaray 20 kulan.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Faransiiska ayaa laga soo reebay tartanka Koobka Horyaalladda Yurub Arbacadii habeenkeedii kaddib markii ay guuldarro 3-1 gurigooda kala kulmeen Manchester United lugta labaad ee wareegga 16-ka Champions League.
“Waan dagaalami doonaa kulan kasta ilaa iyo aan ka mid noqono AFARTA sare ee Premier League” - Sarri